China ifektri engangeni umlilo engangenwa umlilo nabakhiqizi Weicheng
Igama lomkhiqizo I-sealant engangenisi mlilo
Izinzuzo zomkhiqizo Umthamo unwebeka ngaphezu kwezikhathi ezi-5 emlilweni, unokuguquguquka okuhle nokunamathela, futhi kwakha isakhiwo senethiwekhi esinyene ngemuva kokushisa ngomlilo; ingavimba ngempumelelo ilangabi nokudluliswa kokushisa; ukusebenza kahle okuphezulu kwelangabi, ukwakhiwa okulula
Ububanzi Bokusetshenziswa 1.Ukuvalwa ngaphezulu kwezikhala zesikhala esishiyile dengwane, ukubamba udonga, amapayipi womshini, amapayipi wokungenisa umoya, amapayipi wokufaka okushisayo, njll. 2. Ibhodi lokumboza elingacimi ukuvala izikhala; amalunga phakathi kweziqongqo zodonga namabhilidi aphansi; 3. Amapayipi epulasitiki (≤50mm) igebe lokungena; igebe lokungena komsele we-HVAC
Ngokuvamile, i-fire sealant ihlolwa ngendlela eqondile. Ngokuya ngomphumela wokuhlola, ingahlukaniswa nge-FV-0, Fv-1 ne-Fv-2 kusuka phezulu kuye phansi. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukubekwa uphawu kwamakhethini odonga olungacimi umlilo, futhi idinga ikhono le-anti displacement deformation kanye nomlilo nokuvikela intuthu, i-Acrylic acid fire-proof sealant iyahambisana nohlobo lwesibhamu. Uhlobo lwesilinganiso somqondo wobufakazi bomlilo uhlobo oluthile lwento yokubonisa umlilo luhlobo lwezinto zokufaka uphawu lweplastikhi zepulasitiki zokuxhuma, ezinokusebenza okubili kokufaka uphawu nobufakazi bomlilo, futhi zilungele ukwakhiwa kobufakazi bomlilo. Ububanzi bokwakha buhlanganisa amapayipi wensimbi, amapayipi afaka ukushisa kanye namajoyinti wokwakha. Imichilo yokunamathisela esetshenziswe eminyango enobufakazi bomlilo ye-fire-proof sealant expression ayikwazi ukuhlangabezana nezimfuneko zokuqinisekisa umlilo, ngokubuka uhlole ukuthi azikho yini izindawo ezincane ezimhlophe zezinto ezingavuthwa emapheshaneni enjoloba. Uma usebenzisa i-lighter ukuyikhanyisa, yini enye, uma umane ungafaki ama-sealant strips, umsebenzi wokuvikela umlilo nentuthu wokuhlukanisa iminyango yomlilo wensimbi uthinteka kakhulu.
Langaphambilini Ingubo yomlilo
Olandelayo: Izinto eziguquguqukayo zokuxhuma izinto ze-intumescent sealant fireproof